EyeDwarha 22, 2018 admin
Chinas intanethi ifihla liyila kungummiselo zokuqala blockchain
arhente intanethi-kwinqanaba eliphezulu yokuhlolwa eTshayina uceba ukulawula ababoneleli ngeenkonzo ezinxulumene-blockchain kweli lizwe. Umgaqo-nkqubo oyidrafti ubizwa “Le noMmiselo Managing Iinkonzo zoLwazi Blockchain” kwaye umbutho yokuhlolwa ngoku ufuna ingxelo ngokuphandle, phambi kokuba uzakuthatha isiphumo. imithetho, ukuba umthetho, iza kusebenza kuyo nayiphi na iqumrhu China-based kuthathwa njengomniki-nkonzo ulwazi blockchain, yaye bamele enye yezikhokelo yelizwe lokuqala yemimiselo zabuya ngqo kushishino blockchain le.
phakathi 23 amanqaku olucetywayo uyilo, omnye ifuna ababoneleli-nkonzo blockchain ukuba babhalise-arhente ngaphakathi 10 imihla yokuqala ukunika iinkonzo eluntwini. Further, Ababoneleli nkonzo akayi kuvunyelwa ukuba asebenzise ubugcisa blockchain ukuze “velisa, iphinda, ukushicilela, nokusasaza” ulwazi okanye umxholo okuthintelwayo imithetho Chinese. “Ababoneleli ngeenkonzo kufuneka ukugcina iinkuni kunye nesiqulatho epapashwe abasebenzisi beenkonzo zabo blockchain iinyanga ezintandathu kwaye zinike le ngcaciso zokunyanzelisa umthetho xa kufuneka,” uyilo nkqubo ithi.
Visa uza kuqalisa inkqubo yesazisi yedijithali blockchain-based kunye IBM kwikota yokuqala ka 2019
Emva ndaba elakhutshwa ngomhla 21 EyeDwarha, visa ulungiselela inkqubo yalo yesazisi yedijithali blockchain-based iintlawulo cross-umda kuphehlelelwa kwikota yokuqala ka 2019.
le nkqubo, ebizwa Visa B2B Connect, iya kubonelela block-based yesazisi yedijithali isisombululo amaziko zemali ukuphatha ngokunqabisekileyo iintlawulo cross-umda. Le nkqubo neethowuni data business onovakalelo – ezifana iinkcukacha zebhanki kunye neenombolo akhawunti – yaye uwanika into ebonakalisayo eyahlukileyo lokufihla osetyenziswa kwintengiselwano eqongeni.
Kevin Phalen, intloko wonke Visa Business Solutions, kubonisa le nkqubo iza kunceda nobuqhetseba:
"Igama B2B Connect ka-digital kunciphisa kakhulu ithuba lokuba ubuqhetseba amtyeshela zikhona kuhlola, Ach nokudluliswa wire namhlanje, lo gama lisekwanceda iinkampani bahlale iyahambelana njengenxalenye ecosystem mali olulawulwayo. "
Ukusuka ngokwembono technical, isisombululo sidibanise isakhelo Hyperledger Ilaphu (kusingathwa Linux Foundation yaphuhliswa IBM) ne Visa xa “core” imithombo, ngokudala lokukala, network sivunyelwe ukusetyenziswa kwicandelo zemali ,
Jason Kelley, umphathi jikelele IBM Services Blockchain, ucatshulwa esithi inkqubo enye “weyona mizekelo ezinamandla ngendlela Blockchain saguqula iintlawulo.”
Fintech othengisa Bottomline Technologies, osebenza 1,200 amaziko ezemali, iye kwakhona yabambisana Visa kwinkqubo B2B Connect, ubumbano enika “zezezimali mutual” ukufikelela kwinkqubo.
Njengoko ingxelo ngenyanga edlule, sesine ngobukhulu yebhanki Thailand i-, Kasikornbank, usanda kujoyina i B2B Connect iintlawulo cross-umda kuqala.
Ngokutsho kwe website Visa, B2B Connect yaqala ngo 2017, kunye US Commerce Bank, South Korean Shinhan Bank, Union Bank of Philippines kunye United lwaPhesheya Bank e Singapore baba phakathi kwabantu bokuqala ukwenza iintlawulo zorhwebo pilot Qala Processing lugqityiwe.
Ingxelo Daily Market Kraken for 21.10.2018
$24M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
video 2019 SPECIAL.CHINTAI / BAN...
Okugcina Coinbase, Theta Token,...
Post Previous:Crypto News 20.10.2018
Post Next:Crypto News 23.10.2018